Avy any Antsirabe hankaty Antananarivo: «Ambulance» tratra nitondra mpandeha an-tsokosoko | NewsMada
Ankoatra ireo fiara sy olona maromaro tsy nanaja ny fepetra fivezivezena ao anatin’izao fihanaky ny valanaretina coronavirus izao, saron’ny zandary tao Antsirabe, afakomaly alina, ny fiara mpitondra marary (ambulance) an’ny hopitaly Befelatanana saika hitondrana olona an-tsokosoko hankaty Antananarivo.
Raha ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena ao amin’ny vondron-tobim-pileovana Vakinankaratra, nisy ny fepetra manokana noraisina amin’ny fanaraha-maso ny fivezivezena rehetra, manomboka amin’ny 9 ora alina hatramin’ny 5 ora maraina. Nandritra izany no nahatrarana fiara fitondrana marary an’ny hopitaly CHU Befelatanana nitondra mpandeha antsokosoko tao Antsirabe. “An’ny hopitaly Befelatanana ity fiara nitondra mpandeha antsokosoko niainga ity. Olona salama tsara no nentin’ilay fiara ary nandoa saran-dalana avokoa ireo tao anatiny, araka ny filazan’izy ireo”, hoy ny zandary. Mbola nikasa hitodi-doha ho aty an-dRenivohitra indray aza ity fiara ity. “Tsy ekena ary hentitra ny mpitandro filaminana eto amin’ny CCO Vakinankaratra, indrindra ny eny an-dalana amin’ny tsy fanarahan-dalana”, hoy ny zandary. Notazonina avy hatrany ilay “ambulance” niaraka tamin’ireo olona tao anatiny sy ny mpamilin’ny fiara mba hanaovana fanadihadiana.
Afenina any anaty entana ireo mpandeha…
Fa ankoatra ity fiara fitondrana marary ity, fiara Sprinter iray koa no sarona teo amin’ny sakana iray ao Ambatolampy, tamin’io afakomaly alina io ihany. Afenin’ny mpamily any anaty entana “friperie” ireo mpandeha mikasa hiditra aty an-dRenivohitra. Entana avokoa no entin’ilay fiara, hay misy olona ao anelanelany. Nampiahiahy ireo zandary ity fiara ity ka niroso tamin’ny fisavana izy ireo, navoaka ny entana ka akory ny hangagana nahita ireto olona miaraka amin’ny entana. Mafy ary mahita hirika hatrany ny sasany na efa tsy avela hivoaka ny faritra aza. Ahina ny hiparitahan’ity valanaretina ity raha mitohy ny trangan-javatra toy izao.